Mpanamboatra sy mpamatsy PS - China PS Factory
Tavoahangy vava plastika PMisy (akrilika) 7 oz mazava miaraka amina vozona 88-400
Ny plastika vava plastika feno 7 Oz dia plastika feno fonosana ho an'ny zava-tsarobidy. Fandrafetana avo roa heny, ny hatevin'ny tavoahangy plastika misy sakafo hatramin'ny 10mm. Mba hanomezana vokatra azo aseho amin'ny talantalana tonga lafatra. Ny rindrin'ny tavoahangy ivelany dia fisaka. , izay miantoka ny vokatra tsara amin'ny fanontam-pirinty, mba hahafahanao manonta ny sary famantarana ny vokatrao hampiseho ny marikao. Azo ampiasaina amin'ny fonosana fanafody raokandro sinoa, vokatra fikarakarana ara-pahasalamana, sns. fampiroboroboana dokam-barotra. boaty fonosana loko madio fanontana LOGO afaka mamolavola.